Matongerwo eNyika, 13 Mbudzi 2017
Muvhuro 13 Mbudzi 2017
Mbudzi 13, 2017
General Chiwenga Vanoti Zanu-PF Yokonzera Kusagadzikana Munyika
Mukuru wemauto General Constantino Chiwenga nhasi vaita musangano nevatori venhau muHarare vakayambira bato reZanu-PF kuti risarambe richikonzera kusagadzikana munyika nekudzinga varwi vehondo yerusununguko mubato iri.
Vagari Voratidzira Vachiti Vari Kunwa Mvura Yakasviba muHarare
Vagari veguta reHarare vari kunyunyuta zvikuru nemvura yavari kuwana kubva kukanzuru yeHarare iyo yavari kuti yakasviba huye inonhuwa zvikuru.
Vanhu Vashoma Vanonyoresa Zvakare Muchikamu Chechipiri cheBVR
Chikamu chechipiri chechirongwa chekunyoresa chapera nhasi, Zimbabwe Electoral Commission ichiti vanhu vanyoresa kusvaika nezuro vangoti pfuureyi zvishoma mamirion maviri tisingatarise vanyoresa nhasi.
Hurumende Haina Michina Inongorora Chirwere cheGomarara reMelanoma
Vanorarama nechirwere chegomarara rinoita kuti miviri yevanhu iite zvinyama zvinokura vanoti vari kushushikana zvikuru kuti havasi kuwana rubatsiro muzvipatara sezvo hurumende ichinzi haina michina inoshandiswa pakuongorora chirwere ichi.
General Chiwenga Vanoti Kudzingana Kuri Kuitika muZanu PF Ngakumiswe
Mukuru wemauto munyika, VaConstantine Chiwenga, vanoti kudzingana kuri kuitika muZanu PF kunofanirwa kumiswa zvachose sezvo kusina kunakira nyika.
VaMaguwu Vanoti Mamiriro eZvinhu muZvitokisi Akashata
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa, reCenter for Natural Resource Governance, Va Farai Maguwu, vanoti zvitokisi zvemunyika hazvina kumira zvakanaka.
Mbudzi 10, 2017
VaTsvangirai Votyira Kusagadzikana Kungangoitika muZimbabwe
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC, VaMorgan Tsvangirai, vanoti matongero ave kuitwa nyika nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, ave kupa kuti munyika muite kusagadzikana.
Amai Mujuru Voparura People’s Rainbow Coalition neMugovera
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru, vanoti mangwana vanenge vachiparura zviri pamutemo kuBulawayo mubatanidzwa wavakaumba nemamwe mapato mana anovatsigira unonzi People’s Rainbow Coalition kana kuti PRC.
Vakatochwa Vowana Rubatsiro muBudiriro
Mumwe murume wemuHarare, VaIgnatius Mhuriro, avo vakambobatwa batwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika, vakavamba sangano rinobatsira vanhu vanowirwa nedambudziko remhirizhonga nekurapwa pamwe nekuti vatange hupenyu hutsva vachiita mabasa akasiyana siyana.
Masangano Anorwira Kodzera Oshora Mitemo yeKusora
Masangano matatu akazvimirira ega eHuman Rights Watch, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, neMedia Center anoti haasi kufara nemamiriro akaita zvinhu pamitemo mitsva ine chekuita nekushandisa kwemadandemutande, kana kuti Internet.
MDC Yoenderera Mberi neMisangano Yayo kuMash West
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reMDC-T, VaNelson Chamisa, vanoti vachaenderera mberi nemisangano yavo neMugovera muguta reKaroi pamwe nekuHurungwe mudunhu reMashonaland West, zvisineyi nekuti mapurisa akavanyima mvumo yekuenderera mberi nemisangano iyi.
Mbudzi 09, 2017
Britain Inopa Zimbabwe $82m Ichashandiswa Munyaya dzeHutano
Sangano rinomirira Britain munyaya dzerubatsiro reUK Aid kuburikidza nebazi reDepartment for International Development (DFID) rapa hurumende yeZimbabwe mamiriyoni makumi masere nemaviri emadhora kuti ibatsirikane munyaya dzehutano.
Hurumende Ichishanda neWHO Yopa Vanhu vekuManicaland Mushonga weKudzivirira Cholera
Vatsigiri veDynamos Vonetsana neMapurisa Mushure Mekukundwa muPSL
VaChamisa Vanoti muNyika Munoda Nhaurirano dzeChokwadi neKuti Zanu-PF Yoremerwa
Vanhu Gumi neVatatu Voshaya kuHeadlands Munjodzi yeMumugwagwa
Mapurisa Anoti Vanhu Vafa muTsaona dzemuMigwagwa Vsvika paGumi neVanomwe